လေ့လာစရာ CPU အကြောင်း ~ (IT) ကိုထိုက်
3:12 AM IT ဗဟုသုတ No comments
Core i series code name များမှာ
8.Sandy bridge(moblile) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
Core i series code name အုပ်စုမှာ Nehalem Architecture ကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ code name တွေကတော့ Gulftown,Bloomfield, Lynnfield, Clarkfield,Clarkdale နဲ့ Arrandale တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ Sandy bridge Architecture ကိုအခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ code name တွေကတော့ sandy bridge(Desktop) နဲ့ sandy bridge(mobile) တွေဖြစ်ပါတယ်..
Core i series မှာ အောက်ပါအချက်များကွာခြားသွားပါတယ်
1.core အရေ အတွက်ပါဝင်မှု
Core ဆိုတာ တွက်ချက်မှူ real processing unit တစ်ခုဖြစ်ပြီး chip တစ်ခုပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားပါတယ် အဲဒီ core က နှစ်လုံး လေးလုံး စသဖြင့်ပါဝင်ပါတယ်..
Thread ဆိုတာ processor ကို instruction ပေးပို့ ရာမှာ လမ်းကြောင်း 1ခု 2ခု 4ခု 8ခု စသဖြင့်ရှိပါတယ် 2ခုနဲ့ 2ခုအထက်ကို multi-thread လို့ ခေါ်ပါတယ်..
Turbo Boost ဆိုတာ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ core တစ်လုံး နဲ့ တစ်လုံး ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်.. process တစ်ခုကို core တစ်လုံးတည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက core တစ်လုံးတည်းနဲ့ သာ လုပ်ဆောင်ပြီး core တစ်လုံးတည်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ရန်မလုံလောက်တဲ့အခါ core တွေ အချင်းချင်းချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်..
Smart cache ဆိုတာ core ထဲမှာ ပါတဲ့ cache တွေဟာ လိုအပ်တဲ့အခါမှာ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်..
QPI ဆိုတာ processor နဲ့ north bridge ကြားမှာ high speed transfer လုပ်ဆောင်ပါတယ်.. north bridge ကို အရင်ကလို motherboard ပေါ်မှာ chip တစ်ခုအနေနဲ့သီးသန့် ထုတ်မ ထား တော့ပဲ CPU ထဲကို ဆွဲသွင်း လိုက်ပါတယ်..ဒါကြောင့် point to point ချိတ်ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင် နိုင်တယ်..ယခင် FSB နေရာမှာ အစားထိုး ၀င်ရောက်လာပြီး QPI ဖြစ်သွားပါတယ်..cpu အတွင်းမှာ north bridge နဲ့cpu တို့ ချိတ်ဆက်တဲ့ လမ်းကြောင်း ကို Common Serial Interconnect(CSI) bus လို့ ခေါ်ပါတယ်..
Hyper-threading ဆိုတာ processor တစ်လုံးထဲကမှ အချိန်တစ်ခုထဲမှာပင်လျင် thread နစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်ထဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် ဒီနေရာမှာ Thread ဆိုတာ processor ဟာProgram တစ်ခုမှ လာတဲ့ instruction တစ်ခုလုပ် ဆောင်မှုကို thread တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်…Thread ဟာ 2ခု 4ခု 8ခု စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..HT ပါတဲ့processor ဟာ architecture state ကို copyer လုပ်ပြီး logically အရ Processor နှစ်လုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားခြင်းပါ..နဂို physical မှာရှိနေတဲ့cache , execution unit, control unit ,buses စတဲ့resourses တွေကိုမျှဝေသုံးစွဲခြင်းပါပဲ…သာမန် processor တစ်လုံးနဲ့ စာရင် HT processor အလုပ်လုပ်တာ 30%လောက်ပိုပြီးတော့မြန်ပါတယ်...
ပထမဆုံး Nehalem ကထုတ်တဲ့ core i3 ကို 2010 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ မှာ စတင် သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်..Desktop processor မှာ ရော laptop mobile processor အတွက်ပါ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်..
Nehalem ကိုပဲ base လုပ်ထားတဲ့ core i5 ကို စက်တင်ဘာလ ၈ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်..
Nehalem ကိုပဲ base လုပ်ထားတဲ့ corei7 ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်..အဲတုန်းက စစချင်းထုတ်တုန်းက Bloomfield ကိုစထုတ်ခဲ့ပါတယ်..2009 ခုနှစ်မှာ Lynnfield, clarkfield, Arrandale တို့ကိုထုတ်ပါတယ် 2010 ခုနှစ်မှာတော့ Gulftown ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်..ဒါတွေက Nehalem architecture ကိုအခြေခံထား တဲ့ မျိုးကွဲ code name နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ processor series တွေဖြစ်ပါတယ်..
Sandy bridge microarchitecture မှာဆိုရင် code name တွေက sandy bridge(Desktop) နဲ့sandy bridge(Mobile) ဆိုပြီးလာပါတယ်..sandy bridge ကိုအခြေခံထားတဲ့ core i3 ကို ၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ မှာ စတင်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်..
ယခုလက်ရှိထုတ်နေဆဲကာလမှာတော့ အောက်ပါ အတိုင်း sandy bridge core i5 series တွေကို တွေ့ ရ မှာဖြစ်ပါတယ်..
ယခုလက်ရှိထုတ်နေဆဲကာလမှာတော့ အောက်ပါ အတိုင်း sandy bridge core i7 series တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Intel Core i family တွေမှာ code name တွေအားဖြင့် Gulftown,Bloomfield, Lynnfield, Clarkfield,Clarkdale နဲ့ Arrandale တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ Brand name အားဖြင့် Core i7, Core i5, Core i3 ဆိုပြီးရှိတယ်။ Xeon series တွေလည်းပါဝင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့အတွက် မဖော်ပြတော့ဘူး။ သူတို့မှာ desktop သုံးအတွက် LGA 1366 နဲ့ LGA 1156 socket နှစ်ခုရှိတယ်။ LGA 1366 သုံး CPU တွေက DDR3 ကို triple channel ထိအသုံးပြုနိုင်တယ်။ LGA 1156 သုံး CPU တွေက dual channel ပဲရတယ်။ Hyperthreading နည်းပညာကိုပြန်လည်အသုံးပြုလာတယ်။
CPU speed ကိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် Turbo boost ကို ထည့်သွင်းလာတယ်။ ဒါပေမယ့် Core i3 တွေမှာတော့ပါမလာဘူး။ Desktop version နဲ့ Mobile version ဆိုပြီးတော့လည်း ခွဲထားသေးတယ်။ Laptop, Notebook တွေမှာ core i5, i3 ဆိုတိုင်း desktop CPU တွေနဲ့အတူတူလို့မှတ်ယူလို့မရဘူး။ အရင်က FSB တွေအစား Quick Path Interface (QPI) နဲ့ Direct Media Interface (DMI) ကိုအစားထိုးသုံးစွဲလာတယ်။
Gulftown ဟာ Core i7 family ထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်တယ်။ စစဦးပိုင်းမှာ core i9 လို့ခေါ်တွင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ core i7 extreme edition အနေနဲ့ရောင်းချတယ်။ သူမှာ core6ခုပါဝင်ပြီး Hyperthreading နည်းပညာကိုထည့်သွင်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် core တစ်ခုစီကို thread နှစ်ခုနှုန်းနဲ့ core 12 ခုစာအလုပ်လုပ်တယ်။ Nehalem Microarchitecture အစား Westmere Microarchitecture ကိုသုံးထားတယ်။ Process အားဖြင့် 32nm ဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုအဓိကအားဖြင့် workstation တွေနဲ့ extreme desktop system တွေမှာသုံးတယ်။ socket က LGA 1366 ဖြစ်တယ်။
သူ့ကို Brand name အရ Core i7 9xx, Core i7 9xxX နဲ့ Xeon processor အတွက် Xeon 36xx, Xeon 56xx တို့ဖြစ်တယ် (xx သည် speed ပေါ်မှုတည်၍ နံပါတ်ပြောင်းသည်ကိုဆိုလိုသည်။ L3 Cache က 12 MB ရှိတယ်။ Thermal Design Power (TDP) က 130 Watt ရှိတယ်။ L2 cache က core တစ်ခုစီကို 256MB ရှိတယ်။
Bloomfield CPU တွေက High end desktop တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်။ Core i7 CPU တွေဖြစ်တယ်။ သူ့ကို Brand name အရ Core i7 9xx လို့ပေးထားတယ်။ သူက LGA 1366 socket MB တွေမှာတပ်ဆင်နိုင်တယ်။ သူ့မှာ core လေးခုပါဝင်တယ်။ On-die memory controller ပါဝင်လာပြီး memory က CPU နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြ FSB အစား Intel QuickPath Interface ကိုသုံးထားတယ်။ L1 cache မှာ instruction နဲ့ data အတွက် core တစ်ခုကို 32KB စီပါဝင်တယ်။ L2 cache မှာ Instruction နဲ့ data အတွက် နှစ်ခုပေါင်း 256 KB ကို core တစ်ခုစီအတွက်ထည့်ပေးထားတယ်။ L3 cache က 8MB ပါဝင်ပြီး CPU တစ်ခုလုံးအတွက် ဖြစ်တယ်။
Single-die device ဖြစ်တယ်။ Core ၄ခု, Memory controller နဲ့ cache တွေအားလုံးကို die တစ်ခုထဲမှာပေါင်းထည့်ထားတယ်။ Turbo boost technology ပါဝင်လာပြီးသူက core တွေကို တစ်ဆင့်ကို 133MHz နှုန်းနဲ့ အပူချိန်နဲ့ voltage ကိုက်သည်အထိမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ ဟိုးအရင်က CPU တွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Hyper Threading ကိုပြန်လည်သုံးထားတယ်။ ဒါကြောင့် core တစ်ခုကို thread နှစ်ခုစီနဲ့ core 8 ခုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ထုက်လုပ်မှုပုံစံမှာ 45nm process ဖြစ်တယ်။ transistor ပေါင်း 731 Million ပါဝင်ပြီး size က 263 mm2 ဖြစ်တယ်။